Ahoana nu fomba hanangonam-bola amin'ny mailaze Autoresponders
Ny ankamaroan’ny mpitsidika tranonkala dia tsy hiverina avy hatrany ho mpankafy mahatoky. Mety hanamarina ampolony izy ireo, na tranokala an-jatony amin’ity herinandro ity aza, ary indrisy fa mora ny manadino ny anao aorian’ny fanitsakitsahana azy – raha tsy mifandray amin’izy ireo ianao.
E-mail angamba ny teknolojia fahiny raha oharina amin’ny media sosialy, saingy mbola tsara kokoa ny fampahalalana ny hafatrao. Ao amin’ny haino aman-jery sosialy, ny hafatra dia hafahafa ary matetika no ripaka amin’ny feo rehetra. E-mail, etsy ankilany, mijanona ao amin’ny public famoahana, ary tsy mandeha raha tsy noraharahiana.
Ary amin’ny mailaka, tsy voatery hifanaraka amin’ny fihenan’ny tarehimarika, ny mari-pamantarana sary, ny tolotra omena, nay teny mampihoron-koditra.
1.1 1 – Formular de email Optimus
2 Ahoana ny fomba hametrahana ny Autoresponder
Mazava ho azy, mba hahazoana vola avy amin’ny mailaka autoresponder, ianao aloha dia mila mpanjifa.
Saingy tsy hoe ireo mpikirakira – tsy mila solosaina izay liana amin’ny zavatra azonao atolotra. Zava-dehibe ny hampifantoka ny ezaka ataonao amin’ny fananganana lisitr’ireo kalitao izay misy ny mpihaino anao.
1 – Formular de email Optimus
Hevero ny fampiasana sary tsy mampikorontana, mora ampiasaina ahafahana mahazo mpanjifany bebe kokoa. Eto amin’ny WHSR dia mampiasa Ninja Popups izahay. Ianao dia afaka mividy Ninja Popups în amin’ny CodeCanyon. Manoro hevitra ihany koa izahay OptinMonster, Plugins WordPress izay afaka mamorona endrika opt-in forma endrika.
Ny fomba amam-panao alefa ho an’ny mpanjifanao mailaka kokoa dia ny manolotra azy freebie, jucărie ny e-book na ny mailaka, ho an’ireo mpanjifany vaovao.
Ny fomba fanorenana fanorenana hafa mahomby iray izay nanjary nalaza tato ho ato dia ny famolavolana votoaty, izay ahafahan’ny mpamaham-bolongana manolotra maimaimpoana maimaim-poana hanampiana ireo lahatsoratra manokana ("actualizare"), izay tsy misy afa-tsy amin’ny mpanjifa mailaka.
Na izany aza, ataovy izay hahatsiarovanao fa tsy mila mpividy intsony ianao – mila izany ianao marina famandrihana.
Ny freebie anao dia tokony ho an’izay tian’ny mpiloka tianao hidina. Raha manintona ny mpihaino tsy mety ny freebie, dia vao mainka mitombo ny tahan’ny fisoratana. Hevero ny fampiasana ny fanadihadiana ho an’ny mpamaky mba hahalalanao ny tena dikan’ny freebies ho an’ny mpihaino anao.
Ahoana ny fomba hametrahana ny Autoresponder
Pat Flynn avy amin’ny Smart Passive Venitu dia manome ny ampahany betsaka amin’ny fidiram-bolany amin’ny fampiroboroboana Bluehost sy LeadPages.
Mba hividianana ny mailaka autoresponder, dia mila zavatra hivarotana ianao.
Afiliat rohy dia fomba malaza hanangonam-bola amin’ny autoresponders mailaka. Azonao atao ny mampiasa tranokala toy ny Share A Vânzare hitady tombontsoa amin’ny fiarahamonina, na mpiara-miombona amin’ny marika izay efa ampiasanao izay manana programa afilialy, toy ny anao web hosting web company.
Azonao atao ihany koa ny mahazo vola amin’ny fivarotana vokatra sy tolotra anao manokana. Ny vokatra dizitaly, jucărie ny fianarana sy ny ebooks, dia fomba mahazatra hahazoana vola miditra. Na dia mitaky fampiasam-bola ho avy aza izy ireo mba hamoronana ny vokatra, dia afaka manohy ny fidiram-bola izy ireo raha vantany vao vita ny solosainao, tsy misy asa fanampiny takiana aminao.
Na izany aza, tokony hamela ny varavarana misokatra amin’ny varotra amin’ny mailaka tsirairay ianao. Na ny mailaka fampahalalana momba ny informatika aza dia afaka miverina miverina orice amin’ny tranokalanao, izay ahitan’ny mpitsidika rohy mba hividianana ny vokatrao na tsindrio ny rohy misy anao.
Ho an’ny harena ankapobeny, manolotra vokatra sy serivisy isan-karazany amin’ny vidiny isan-karazany mandritra ny seranam-piaramanidina manerantany. Satria tsy mandeha ny mailaka mivarotra fivarotana 500 iray, tsy midika izany fa tokony handao ireo mpanjifanao ireo ianao. Andramo ny fanitarana ny laharan-dalan’ny mpampiasa anao mba hanolorana $ mini-kisary 50 koa.
Anisan’ireo mpanentana mailaka hafa amin’ny mailaka, ConstantContact dia anarana mipetraka tsy tapaka (tsy misy marika natao). Ankoatry ny fahaiza-manaony fototra amin’ny marketing mailaka, dia niparitaka ihany koa ny vohikala mba hampidirana tolotra hafa mifandraika amin’ny varotra izay misy. Zahao hoe Ny famerenana ifanakalozana tsy tapaka Tim mba hahitana bebe kokoa.
GetResponse dia fitaovana electronika mailaka nosoratana miaraka amin’ny lohahevitra lehibe amin’ny mpanoratra. Efa nandritra ny 15 taona izy ireo. Ampiasainay eray hanamboatra, handefa ary handefa mailaka an-tsoratra mailaka ho an’ny mpanjifanay amin’ny vidiny sarobidy. Zahao hoe Ny famerenana an’i GetResponse an’i Jerry mba hahitana bebe kokoa.
AWeber dia lisitry ny lisitry ny mailaka malaza izay ahitana fanasongadinana iray hafa. Manolotra rindrambaiko RSS ho amin’ny mailaka ihany koa izy ireo mba hahafahan’ny mpampiasa anao mamoaka lahatsoratra farany amin’ny blôginao, ka mahatonga ny gazetinareo ho tanteraka.
MailChimp dia fitaovana malaza amin’ny alàlan’ny mailaka malaza noho ny fampiasany mora ampiasaina sy ny modara tsara tarehy (tsy lazaina intonsony ny masokotokotikotika). MailChimp dia manolotra fitaovana fampiasa amin’ny ordinatera miaraka amin’ny kaonty karama fotsiny. Amin’ny fitaovana maoderina ataonao dia afaka mametraka mailaka maromaro ho an’ny mpanjifanao vaovao ianao, na mametraka mailaka alefa aorian’ny fisehoan-javatra maromaro (jucărie ny fandefasana tapakila aorian’ny fividianana entana iray).
Na dia maka fotoana ahafahana manangana ny mailaka mpanangom-bola electronika aza, raha vantany vao tafapetraka izy ireo, dia mety ho loharanom-bola azo antoka ho an’ny mpitoraka blaogy sy ny orinasa an-tserasera.